Fanavaozana na fametrahana ny macOS Monterey vaovao avy hatrany? | Avy amin'ny mac aho
Fanavaozana na fametrahana ny macOS Monterey vaovao avy hatrany?
Ity dia iray amin'ireo fanontaniana lehibe ho an'ireo mpampiasa Mac an-tapitrisany izay efa hahazo ny kinova vaovao amin'ny solosain'izy ireo. Tsy misy isalasalana fa fanapahan-kevitra lehibe ho an'ny maro io ary na dia ankehitriny aza dia tsy miovaova be ny kinovan'ny macOS (farafaharatsiny eo amin'i Catalina sy Monterey) Eny, afaka manana sisa tavela amin'ny rindranasa, fitaovana na mitovy amin'izany isika izay mety hiteraka tsy fitoviana amin'ny asan'ny Mac.
Izaho manokana, isaky ny kinova vaovao dia manao fametrahana madio na zero amin'ny solosainako aho. Ny iMac efa antitra ary tsy manohana intsony ny macOS Monterey vaovao fa azo antoka raha ny momba ahy amin'ny fitsapana marobe izay ataoko eo aminy dia ho fametrahana madio madio izy io.
Elaela ve ianao tsy nanavao ny fitaovanao tamin'ny voalohany?
Ity no fanontaniana lehibe amin'ireo toe-javatra ireo satria na dia marina aza fa tsy mamporisika ny hametraka avy hatrany am-boalohany i Apple amin'ity fotoana ity dia indraindray no tsara indrindra rehefa Tsy nametraka kinova madio tamin'ny Mac izahay nandritra ny taona maro. Na izany na tsy izany dia eo am-pelatanan'ny mpampiasa foana ny fanapahan-kevitra, ka tsy misy olana na izany na tsy izany.
Olana iray hafa ny fahazaran'ny mpampiasa, indrindra ireo mpampiasa Mac tranainy indrindra. Androany ary mahita ny fanatsarana ny OS an'ny Apple tsy dia zava-dehibe loatra intsony izao ny fanaovana io fametrahana io amin'ny volo fa azo atao ny manana an'io fahazarana io isaky ny misy OS vaovao tonga ary noho izany ny valiny amin'izany dia ny manohizanao azy satria tsy dia sarotra loatra ny manao ny fametrahana madio ary kely kokoa rehefa eo am-pelatanantsika izy io.
Etsy ankilany, misy ny mpampiasa izay tsy manana tsy fahombiazan'ny fitaovana, ny rindranasa na ny rafitra mihitsy dia mila fotoana bebe kokoa hanokafana ary noho izany ny fametrahana amin'ny rafitra ankehitriny dia tsy handratra azy ireo ary mety hiasa ny Mac manatsara. Araka ny nolazaiko tany am-piandohana Hiankina amin'ny lafin-javatra marobe io, fa ankehitriny tsy adidy intsony ny manao fametrahana madio rehefa tonga ny kinova vaovao amin'ilay rafitra. Ny zava-dehibe amin'ireto tranga ireto dia ny alohan'ny handefasana hanavao na hametraka amin'ny voalohany dia manaova kopia backup amin'ny Time Machine anao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Mac OS X » macOS Monterey » Fanavaozana na fametrahana ny macOS Monterey vaovao avy hatrany?
Azonao atao izao ny mahita ny tranofiara an'ny sarimihetsika Apple TV + "Finch" starring Tom Hanks